Zọ kachasị mma iji zipu faịlụ ederede ma kesaa site na Mac gị na ngwaọrụ ndị ọzọ | Akụkọ akụrụngwa
Bestzọ kachasị mma iji zipu faịlụ ederede ma kesaa site na Mac gị na ngwaọrụ ndị ọzọ
Mmanya na-egbu egbu | | android, software, Windows
Otu ụzọ esi ezipụ faịlụ ma ọ bụ ederede karịrị ndị ozi si email ma ọ bụ ozugbo. Anyị na-adịbeghị anya hụrụ na-amaghị aha ngwọta nke Volafile ma taa anyị ga-ahụ ụzọ ọzọ. Ndị ozi dị mma ma ọ bụrụ na ị na-ezigara onye ọzọ na-abụghị onwe gị ederede ahụ, mana ọ bụrụ na ịchọrọ ka ha zigara onwe gị ma ọ bụ usoro ọzọ ị nwere ike iji, onye ozi nwere ike ọ gaghị abụ nhọrọ kacha mma. Abịa na iziga onwe gị faịlụ, ị ga na-ezigara ha email mgbe niile. N'okwu abụọ ahụ, ị ​​na-eziga faịlụ ndị ahụ, ebe ha chọrọ ya na sistemụ dị iche, mana anyị na-enweta nke ahụ na ụgwọ nke ijikọ igbe email. Ndị a bụ ụfọdụ ụzọ ị nwere ike izipu faịlụ na ederede sitere na Mac na ngwaọrụ ọ bụla, yabụ Android, iPhone, iPad, Mac ndị ọzọ ma ọ bụ Windows PC.
Zipu ederede site na Mac na ngwa iOS
Izipu ozi ederede site na Mac na iPhone ma ọ bụ iPad gị adịla mfe, n'ihi ozi ndị ga-ebido na ọdụm ugwu, mana ọ dị maka Ọdụm ndị dị njikere inye ụdị beta ahụ. Iji zipu faịlụ na onyonyo (naanị faịlụ onyonyo - ọ naghị adakọ na ụdị faịlụ ndị ọzọ), ihe ị ga - eme bụ izipu onwe gị ozi. Mac na ngwaọrụ IOS enweghị njikọ na otu netwọk Wi-Fi, agbanyeghị na ngwaọrụ abụọ ahụ ga-enwerịrị njikọ Internetntanetị. Iji zipu ozi ederede ma ọ bụ ihe oyiyi faịlụ, oghe ozi, ike ọhụrụ ozi, tinye gị Apple ID. Ziga ozi na ị ga-enweta ya na gị iOS ngwaọrụ. Ọ bụ ezie na ozi ahụ ga-apụta ugboro abụọ n'akụkụ abụọ, zitere ma nata, mana agbanyeghị, ọ ga-adị ebe ahụ.
Eziga faịlụ site na Mac ka iOS ngwaọrụ
Iji zipu faịlụ site na Mac gị na iPad ma ọ bụ iPhone, ị ga-eche ụdị mmachi ihu, nke ngwaọrụ abụọ ahụ ga-adị na otu netwọk Wi-Fi. Jiri ngwa ole na ole, akpọrọ Nyefee maka Mac na Nyefee egosipụta maka iOS (ha abụọ bụ n'efu), ma bido izipu faịlụ ndị ahụ. Nnyefe faịlụ nwere ike ịdị ntakịrị, mana enwere ike zigara ibe ha na ngwa a pụrụ ịtụkwasị obi. Ọzọkwa, ị nwere ike paswọọdụ chebe nnyefe faịlụ iji hụ na ọ nweghị onye ọzọ nwere ike iziga ya na sistemụ ma ọ bụ ngwaọrụ gị.
Zipu faịlụ site na Mac ka Mac ma ọ bụ Windows PC
Otu n'ime ọtụtụ ihe kpatara faịlụ ịkekọrịta na-egbu mgbu bụ n'ihi na ọ bụghị mmadụ niile na-eji otu ikpo okwu, ụfọdụ dị ka Macs, na ndị ọzọ na-eji Windows PC. Mba ndị ọzọ nwere ike ịnwe ngwakọta Mac na Windows PC. Ọ bụrụ na ị nọ n'ọnọdụ ebe ị ga-arụ ọrụ na nyiwe abụọ ma chọọ ụzọ dị mfe ma rụọ ọrụ nke ọma iji zipu na ederede ederede, azịza gị dị na nnukwu ọrụ ntanetị abụọ dị maka nyiwe abụọ, Evernote na Dropbox.
Wụnye Evernote na Mac na PC ị chọrọ ịgbanwe faịlụ n'etiti ha. Mepụta akwụkwọ edeturu kpọmkwem maka ịgbanwere ederede, ma mepụta ndetu oge ọ bụla ị nwere ederede iji zipu. Nweta ha n'aka Mac ndị ọzọ ma ọ bụ Windows PC gị na ngwa ngwa.
Maka izipu faịlụ n'etiti sistemụ abụọ, Dropbox bụ nhọrọ dị mma maka onye ahịa desktọọpụ gị na ọ bụghị naanị na-eme ka izipu faịlụ dị mfe, kamakwa na-agwa gị mgbe ị natara faịlụ ọhụrụ. N'adịghị ka ojiji ya maka nchekwa, ịnwere ike iji Dropbox dị ka ọnụ ụzọ ámá dị n'etiti usoro abụọ. Ọ bụrụ na sistemụ ịchọrọ izipu faịlụ abụghị nke gị, ma emesịa, ahazighị ya na Dropbox ID gị, tụlee ịmepụta folda ejiri na onye ịchọrọ izipu faịlụ site na ịgbakwunye faịlụ na ya. Ebugote na nbudata nke faịlụ ga-ewe oge, agbanyeghị, dabere na ọsọ nke njikọ Internetntanetị gị.
Ngwọta Nile Maka Ederede Ederede N'etiti Ngwaọrụ Abụọ
Ọ bụrụ n'ịchọrọ iji otu usoro iji kpọtụrụ naanị ngwaọrụ ọ bụla mgbe ị na-eji Mac, Gburugburu bụ ihe magburu onwe ọrụ na ngwa maka Mac, Windows, iOS na gam akporo. Nwere ike iji Clip.Share web interface ma ọ bụ jiri ngwa ahụ iji gbanwee ederede ederede. Biko rịba ama na achọrọ akaụntụ Gmail o Ngwa Google iji zipu ozi ederede n’etiti ngwaọrụ abụọ. Ngwaọrụ ndị a nwere ike ịdị n’ebe ọ bụla n’ụwa, ebe a na-ezipụ iberibe iberibe na Internetntanetị. Otu njedebe bụ na enwere ike 'ịdọrọ' otu 'koodu' n'otu oge, agbanyeghị n'otu oge, agbanyeghị na enwere ike iwepụ ya na otu ngwaọrụ ma nata nọmba ọ bụla. Enweghị ngwọta yiri nke ahụ maka izipu faịlụ, ọkachasị nke dị mfe izipu faịlụ n'etiti Mac na gam akporo, nke ga-agakwaghị arụ ọrụ dịka Dropbox nke dị na ọtụtụ nyiwe.
Echere na nke a ga - egbochi email gị maka ihe ndị dị ebe ahụ n'ihi na ị ga - ezigara ha n'onwe gị ma ị nweghị nchekwa ọ bụla nwere ike iwepụ na aka iji detuo ha. Banyere izipu faịlụ ma ọ bụ ederede n'etiti Mac na ngwaọrụ IOS, enwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwa na-akwado. Ka izipu faịlụ ma ọ bụ ederede na enweghị Apple nyiwe, ị ga-adabere na a web ọrụ. Usoro ga-adị ka ezigbo dịka ngwa maka nyiwe dị iche iche.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Bestzọ kachasị mma iji zipu faịlụ ederede ma kesaa site na Mac gị na ngwaọrụ ndị ọzọ
Sniper J.Randall V2 nyocha
jetAudio na-eweta egwu egwu dị egwu ma na-agbanwe agbanwe na gam akporo